Senator Faroole oo kamid noqday guddi loo saaray xal u helida cabashooyinka shillin Soomaaliga – Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta shir-guddoominayay shir gaar ah oo looga hadlayay xal u helida cabashooyinka la xiriira shillin Soomaaliga.
Kulanka waxaa ka qeyb-galay madaxweyne ku-xigeenka Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, madaxweynihii hore Senator Cabdiraxmaan Faroole, masuuliyiinta Wasaaraddaha Arrimaha Gudaha, Maaliyadda, Ganacsiga iyo Qorsheynta, Bangiga Dowladda, Wasiiradii hore ee Maaliyadda Faarax Cali Shire iyo Cabdullaahi Shiikh.
Sidoo kale kulanka waxaa ka qeybgalay Khuburo ku xeeldheer arrimaha dhaqaalaha, La taliyeyaal Madaxweyne , Saraakiil Madaxtooyo, Taliska Ciidamada Booliska, Maamulka Gobolka Nugaal, kan degmada Garoowe iyo qaar ka mid ah madaxda Jaamacadaha Puntland.
Senator Faroole iyo Guddi uu Guddoomiye ayaa loo xil saaray xal u helista sicir-bararka ka jira deegaannadeeda. Wasiirkii Maaliyadda ee xukuumaddii Faroole, Faarax Cali Shire iyo khuburo kale ayaa sidoo kale kamid ah Guddigan.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo dalka Suudaan kula kulmay xubin ka tirsan Golaha Sare ee dalkaasi